တရုတ် Thermal Bag စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်း | Huizhou
ပလပ်စတစ် Cooler Box ကို
အပူအိတ်သည်အဆိုပြုထားသည့်အတိုင်းအပူနှင့်အအေးခံကွန်တိန်နာဖြစ်ပြီးအိတ်၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းကိုအမှန်တကယ်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်မှကာကွယ်ရန်နှင့်အပူနှင့်အအေးလေကြောင်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအားနည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အေးမြသောသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောနှစ်မျိုးစလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤအတောအတွင်းအသုံးပြုသောအပူပစ္စည်းသည်နူးညံ့။ ဒဏ်ခံနိုင်သည့်အတွက်သင်၏ထုတ်ကုန်များအားအကာအကွယ်များစွာပေးသည်။
1. အိတ်အပူအိတ်သည်အပူနှင့်အအေးခံကွန်တိန်နာဖြစ်ပြီးအိတ်၏အတွင်းပိုင်းအစိတ်အပိုင်းကိုအမှန်တကယ်ပြင်ပပတ် ၀ န်းကျင်မှကာကွယ်ရန်၊ အပူနှင့်အအေးလေကြောင်းလွှဲပြောင်းခြင်းကိုအားနည်းစေသည်။ ၎င်းသည်အေးမြသောသို့မဟုတ်နွေးထွေးသောနှစ်မျိုးစလုံးကိုထိန်းသိမ်းထားသည်။ ဤအတောအတွင်းအသုံးပြုသောအပူပစ္စည်းသည်နူးညံ့။ ဒဏ်ခံနိုင်သည့်အတွက်သင်၏ထုတ်ကုန်များအားအကာအကွယ်ပေးသည်။
ယေဘူယျအားဖြင့်အပူအိတ်တစ်ခုအားအလွှာ (၃) ပိုင်းဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဆိုလိုသည်မှာအတွင်းပိုင်း၊ အလယ်အပူပစ္စည်းများနှင့်အပြင်ဘက်အခွံ။ နို့၊ ကိတ်မုန့်၊ အသားနှင့်ဆေးဆိုင်များအတွက်အသုံးပြုမှုအမျိုးမျိုးအပေါ်တွင် မူတည်၍ သင်သည်ဒီဇိုင်းအမျိုးမျိုးရှိသည်။ သင်၏အခြားရွေးချယ်စရာများအတွက်ဇစ်၊ ပုံနှိပ်ခြင်း၊ ဆွဲခြင်းစသည်ဖြင့်အခြားဆက်စပ်ပစ္စည်းများကိုလည်းရရှိနိုင်သည်။
3. အကယ်၍ အပူအိတ်များကိုဆေးဝါးများဖြန့်ဝေရန်အသုံးပြုပါကသင်အပူချိန်မော်နီတာလိုအပ်နိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အပူအိတ်အချို့ကိုတစ်ကြိမ်ထုပ်ရန်ဒီဇိုင်းဆွဲသည်။
အအေးကွင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အပူအအေး (သိုလှောင်ထားသည့်အအေးနှင့်အပူဓာတ်နှစ်မျိုးလုံး) ကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက်အပူအိတ်များကို gel gel သို့မဟုတ်ရေခဲအုတ်များအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
1.Huizhou Thermal Bag သည်ပြင်ပကမ္ဘာမှအပူကိုအအေးခံ။ အိတ်အတွင်း၌အပူသို့မဟုတ်အအေးကိုထိန်းသိမ်းရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ 2. အများအားဖြင့်၎င်းတို့သည်အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ပြင်ဆင်ထားသောအစားအစာများ၊ အေးခဲနေသောအစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံး၊ ကိတ်မုန့်၊ အဓိကအားဖြင့်အစားအစာနှင့်ဆေးဝါးဆိုင်ရာထုတ်ကုန်များ။
၃။ အပူအိတ်များသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ပစ္စည်းများအတွက်အပူလွှဲပြောင်းခြင်း၊ လျှပ်ကူးခြင်း၊ ထုတ်လွှတ်ခြင်းအတွက်သုံးမျိုးအားဆန့်ကျင်သောအကာအရံအဖြစ်ဆောင်ရွက်သည်။
4. ကျွန်ုပ်တို့၏အပူအိတ်များသည်အအေးနှင့်ပူနွေးစေရန်အအေးကွင်းကိုသယ်ဆောင်ရာတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ သို့မဟုတ်စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောကုန်ပစ္စည်းမြှင့်တင်ရေးအခါမျိုးတွင်သင်ကြည့်ကောင်းသည့်အိတ်တစ်ခုလိုအပ်သော်လည်းကုန်ပစ္စည်းနှင့်အတူကုန်ကျစရိတ်သက်သာစွာဖြင့်လိုအပ်သည်။
၅။ အပူအိတ်များသည်များသောအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ gel gel pack နှင့် ice brick ကဲ့သို့သောအခြားအအေးခန်းများနှင့်အသုံးပြုသည်။
နေရာချွေတာရန်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လွယ်ကူစေရန် 3.Collapsible ။
1. အပူအိတ်များအတွက်ပုံမှန်အသုံးပြုမှုသည်အပူချိန်ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေရန်လတ်ဆတ်သောအစားအစာများပေးပို့ခြင်း၊ ထုတ်ယူသောအစားအစာသို့မဟုတ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့သောအအေးခန်းသို့တင်ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။
2. အရောင်းမြှင့်တင်ရေးအခါသမယတွေဖြစ်တဲ့အမဲသား၊ နို့၊ ကိတ်မုန့်ဒါမှမဟုတ်အလှကုန်တွေကိုမြှင့်တင်တဲ့နေရာမှာသင့်ရဲ့လှပတဲ့လက်ဆောင်အထုပ်တစ်ခုလိုအပ်တယ်၊ စျေးသိပ်မသက်သာဘူး။
ရေခဲတုံးများနှင့်ရေခဲခဲများနှင့် တွဲဖက်၍ အချိန်ကြာမြင့်စွာသတ်မှတ်ထားသည့်အပူချိန်တွင်သိုလှောင်ထားရန်လိုအပ်သည်။
ရှေ့သို့ ပလပ်စတစ် Cooler Box ကို
နောက်တစ်ခု: Insulated Box Liner